Iphone Battery - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Iphone Battery)
Ukushintshwa kwebhethri entsha ye-iPhone 6 Plus ye-iPhone 6 Plus yakho yokuguga I-iPhone 6 Plus 2915mAh 4.3V 11.1whr Njengoba i-Apple ihlonipha amamodeli ase-Older iPhone angase anciphise ngenxa yebhethri eliguga. Uma udinga ukushintshwa kwebhethri entsha ye-iPhone 6 Plus ye- iPhone yakho yokuguga, izinto kungenzeka...
I-iPhone 6 Ibhethri Yokuguqulwa Ne-Original Texas Instruments IC I-iPhone 6G 1810mAh 4.7inch 3.82V I-Apple iyakuthanda imodeli yase-Older ye-iPhone ingase ihlehliswe ngenxa yebhethri eliguga. Njengoba i-iOS 11.3 no-11.4 ivuselelekile, ukuvikela i-TI yangempela kuphephile kakhulu okusetshenziswe yi-iPhone 6 Battery...
I-iPhone 6 Li-ion Ukushintshwa Kwebhethri ngezinga elihlukile lezinga eliphezulu I-iPhone 6 1810MAh 4.7inch 3.82V Umklamo wesiphakelalwazi sokuvikela: uvimbela ibhethri ekuguleni, ukujikeleza, ukukhipha ngokweqile, ukukhipha nokuhamba okufutshane. Njengoba uhlelo i-Apple iOS 11.3 luvuselele, i-iPhone 6 Faka...
Ukushintshwa kwebhethri ye-Brandnew iPhone6 ​​Plus ne-Original Texas Instruments IC I-iPhone 6 Plus 2915mAh 4.3V 11.1whr Ingabe i-iPhone6 ​​Plus ibhethri yakho idonsela ngokushesha? Nweba impilo yakho yebhethri ye-iPhone 6Plus ngenkathi ushintsha esikhundleni se-Brandnew iPhone6 ​​Plus esikhundleni sebhethri nge-TI...
Ukushintshwa kwebhethri ye-Brandnew iPhone6 ​​Plus ne-Original Texas Instruments IC I-iPhone 6S Plus 2750mAh 4.3V 10.45whr Ingabe i-iPhone6S Plus ibhethri yakho idlula ngokushesha? Nweba impilo yakho yebhethri ye-iPhone6S Plus ngenkathi ufaka esikhundleni se-Brandnew iPhone6S Plus Battery Replacement nge-TI IC....
Iphone Battery Iphone Battery Pack IPhone SE Battery Iphone 7 Battery Pack iPhone battery Iphone 6S Battery Pack Cell Phone Battery IPhone6S Plus Battery